mccnepal – Page2– मातृभूमी
अपराधी बिरालो जेलबाट भाग्यो
लागु औषध ओसारपसारमा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेको एउटा बिरालोले जेलब्रेक गरेर भागेको छ । श्रीलंकाको एक मुख्य जेलमा थुनिएको उक्त बिरालो सोमबार भागेको हो । सो बिरालो लागु...
रोनाल्डोले खरिद गरे विश्वकै सबैभन्दा महँगो कार
चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हालै विश्वकै सबैभन्दा महँगो कार खरिद गरेका छन् । दुनियाँको सबैभन्दा महँगो कार बुगाटी ला वायोएवर हो । हालै आफ्नो क्लब युभेन्टसले इटालियन सिरी ए...
माइक्रोसफ्ट कम्पनी टिकटक खरिद गर्दै
अमेरिकी कम्पनी माइक्रोसफ्टका लागि चिनियाँ एप टिकटक खरिद गर्ने मार्ग प्रसस्त भएको छ । अमेरिकामा टिकटकको व्यवसाय खरिद गर्ने माइक्रोसफ्टको योजनाप्रति नकारात्मक रहेका अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो विरोध...
फिल्म छायांकनका लागि बेलायत उडे अक्षय
मातृभूमी संवाददाता बलिउड नायक अक्षय कुमार बेलायत उडेका छन् । उनी, आज चलचित्र ‘बेल बटम’को छायांकनका लागि लण्डन उडेका हुन् । उनीसँग नायिका ट्विंकल खन्ना र उनका दुई सन्तान...
मातृभूमी संवाददाता । २३ साउन काठमाण्डौ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले खेलाडीको पीसीआर परीक्षणको नतिजाका आधारमा प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने भएको छ । आउँदो भदौ १ गतेदेखि थाल्ने प्रशिक्षणका लागि...
मातृभूमी संवाददाता नायिका केकी अधिकारीले पहिले साइन गरेको चलचित्र ‘विच्छेद’ थियो । तर, लगतै चलचित्र ‘परदेशी २’को पनि अफर उनलाई आयो । उनले यो चलचित्र पनि साइन गरिन् ।...
युरोपा लिगको क्वाटरफाइनलमा सेभिल्ला र लिभरकुशेन
एजेन्सि सेभिल्ला र लिभरकुशेन युरोपा लिग फुटबलको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । राति भएको खेलमा सेभिल्लाले रोमालाई २ शून्यले तथा लिभरकुशेनले रेन्जरलाई १ शून्यले हराउँदै अन्तिम ८ मा स्थान...
ओली–प्रचण्डबीच हुने विहिवारको संवाद फेरि टुट्यो
मातृभूमी संवाददाता । २३ साउन काठमाण्डौ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबीच बिहीबार हुने भनिएको भेटवार्ता पनि स्थगित भएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड...
देशभर तत्काल लकडाउन हुँदैन : मन्त्रि डा. खतिवडा
मातृभूमी संवाददाता । २३ साउन काठमाण्डौ देशभर तत्काल लकडाउन नहुने भएको छ । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्काल देशभर ‘लकडाउन’ नहुने स्पष्ट पारेका छन्...
राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समिति सभापतिका लागि शुक्रवार निर्वाचन हुँदै
मातृभूमी संवाददाता । २३ साउन काठमाण्डौ राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिका लागि चारजनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित...